Nezvedu - Szlightall Optoelectronics Co., Ltd.
SZLightall Optoelectronics Co, LTD.
SZLIGHTALL Optoelectronics Co, LTD. rakaumbwa muna 2013. dzimbahwe rayo riri Shenzhen. Sezvinozivikanwa, Shenzhen ihombe yakatungamirwa indasitiri base, heino yakakwana SUPPLY cheni ye LED inoratidzira. Isu tiri nyika yepamusorosoro bhizinesi rinotarisa paR & D, kugadzira, kutengesa uye kushandira kwe LED kuratidza. Isu tine yedu yega yekushandira Center uye yekugadzira base muShenzhen, vakatotengesa kune dzimwe nyika dzinopfuura zana pasirese, nemapurojekiti mazhinji akabudirira.
Mushure memakore ekuvandudza, isu takaunganidza zvakapfuma ruzivo rweR & D uye ine yekutanga-kirasi zvoga zvigadzirwa zvekugadzira, standard yakachena otomatiki yekugadzira chirimwa uye anti-static system zvishandiso. Iyo yakagadzika yakarongeka, yehunyanzvi yekugadzira maitiro ekuratidzira, ayo anopa anovimbisa gadziriso kune yekuvandudza kweyakagadzikana mhando uye chigadzirwa mutengo unoshanda kwatiri.
Zvigadzirwa zvine huwandu hwakazara uye dhizaini kusiyanisa, zvigadzirwa zvaro zvinofukidza yakazara yakazara mavara ekuratidzira kwemukati nekunze, LED kushambadzira kuratidza, LED nhanho kuratidza, LED isina kujairika-chimiro kuratidza, rori nhare yakatungamirwa kuratidza, LED yemitambo kuratidza, LED traffic ruzivo kuratidza, iyo rave rinotongwa mudzimba uye musika wepasi rose muindastiri ino.
Parizvino, isu tine anopfuura zviuru zvishanu zvinobudirira zviitiko kubva pasirese pasirese. Isu tinokunda kuvimba kwemakambani epasi rose uye tinoonekwa pamakwikwi mazhinji epasirese uye zviitiko zvepasirese, zvichikwezva zviuru zvevatengi. Isu tinonamatira pakutenda kwedu kwekushanda: "chigadzirwa chepamusoro-soro, tekinoroji yepamusoro, sevhisi yepamusoro". Isu tinonamatira kune vatengi-centric uye tinoramba tichigadzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kuhwina rukudzo uye kuvimba. Chigadzirwa chedu chakatungamira mukuenderana nechitupa che3C, UL, TUV, EMC, CE, RoHS uye ISO9001 standard muindasitiri.
Kambani yedu ine yakanaka kwazvo kushambadzira, tekinoroji uye manejimendi timu, ivo vakapfuma neruzivo mune ino yakakwenenzverwa, kuti tikwanise kutarisa pane chigadzirwa R & D, tora zvigadzirwa zvitsva uye nekuvandudza tekinoroji nguva dzose. Chikwata chiri maawa makumi maviri neshanu pamhepo sevhisi, gadzirira kugadzirisa chero dambudziko kune vatengi. Nekuda kwemhando yepamusoro chigadzirwa nemakwikwi mutengo, mhinduro dzehunyanzvi uye yakanaka mushure mekutengesa sevhisi, Lightall Kambani inowana kurumbidzwa kwakakwirira kubva kune vatengi pasi rese. Zvisinei, hatina kumira; isu ticharamba tichipa zvimwe zvigadzirwa zvakanaka uye sevhisi kune vatengi vedu. Chinangwa chedu chiri kuchengetedza kwenguva yakareba kubatana nevatengi.